လုံးဝကြွေလောက်အောင် လည် ပြန် ငေးမယ့် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျလေးဂေါ်နေတဲ့ ပိုပို – XB Media Myanmar
လုံးဝကြွေလောက်အောင် လည် ပြန် ငေးမယ့် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျလေးဂေါ်နေတဲ့ ပိုပို
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပိုပိုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို အသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုဖန် တီးတတ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော်မလေးကို ပရိသတ်တွေ မြင်ယောင်မိမှာ ပါနော်..။
အနုပညာလောကမှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့ ဂီတသက်တမ်း(၁၃)နှစ် ဖြတ် သ န်းခဲ့တဲ့ ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့သီချင်းတိုင်းလိုလိုဟာ ပရိသတ်တွေကိုအကြိုက်တွေ့စေပြီး အမြဲ ရေပန်းစားကာ ယောကျ်ားလေး မိန်းကလေးမရွေး အားလုံးက ချစ်ခင်အားပေးနေ ကြသူ လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ရှိတဲ့ အချစ်တော်လေး ပိုပိုကတော့ အခုတ စ်ခါမှာလည်း လုံးဝကြွေလောက်အောင် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျလေး မိမိုက်နေပြန်ပါတယ်နော်..။
ဆွဲဆောင်မှုတွေအပြည့် ညို့အားပြင်းလွန်းပြီး လည်ပြန်ငေးရလောက်မယ့် အဖြူရောင်ဖ က် ရှင်ခပ်မိုက်မိုက်လေးနဲ့ အထာကျကျလေး ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ချစ်စရာစ ကားလေးဆိုရင်း ပရိသတ်တွေကို အသည်းယား အချစ်ပိုစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
“ချစ်ပါ လို့ တောင်းဆိုမိတာ မ ရဲ့ အမှားတစ်ခုလား မောင်
မ ရဲ့ One lady Show နီးပြီနော်
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလို့ရပါတယ် မောင်..” ဆိုပြီး အရွန်းဖောက်ကာ ချစ်စဖွယ်လေးဆိုရင်း သူမရဲ့အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာပါနော်..။
ကဲ.. ပရိသတ်အသည်းကျော်လေး ပိုပိုကတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ(၂၉)ရက်နေ့လေးမှာ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် One Lady Show ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Masterpiece In Mandalay Show ပွဲကြီးကို မန္တလေးမြို့၊ Yadanarpon Event Park မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာမို့ ပရိသတ်တွေ အားပေးကြဖို့ အသင့်ပဲလား..??
Source – ပိုပို Facebook Page
Photo Credit – Kelvin,Reference&Credit;Myamarload.com
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ပိုပိုလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြကို အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ သီဆိုဖန္ တီးတတ္တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္မေလးကို ပရိသတ္ေတြ ျမင္ေယာင္မိမွာ ပါေနာ္..။
အႏုပညာေလာကမွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ဂီတသက္တမ္း(၁၃)ႏွစ္ ျဖတ္ သ န္းခဲ့တဲ့ ပိုပိုကေတာ့ သူမရဲ့သီခ်င္းတိုင္းလိုလိုဟာ ပရိသတ္ေတြကိုအႀကိဳက္ေတြ႕ေစၿပီး အျမဲ ေရပန္းစားကာ ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလးမေရြး အားလုံးက ခ်စ္ခင္အားေပးေန ၾကသူ ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
အႏုပညာလွုပ္ရွားမွုေလးေတြကို အျမဲမၽွေဝေလ့ရွိတဲ့ အခ်စ္ေတာ္ေလး ပိုပိုကေတာ့ အခုတ စ္ခါမွာလည္း လုံးဝေႂကြေလာက္ေအာင္ အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ အထာက်က်ေလး မိမိုက္ေနျပန္ပါတယ္ေနာ္..။
ဆြဲေဆာင္မွုေတြအျပည့္ ညိဳ႕အားျပင္းလြန္းၿပီး လည္ျပန္ေငးရေလာက္မယ့္ အျဖဴေရာင္ဖ က္ ရွင္ခပ္မိုက္မိုက္ေလးနဲ႔ အထာက်က်ေလး ဓာတ္ဖမ္းထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာစ ကားေလးဆိုရင္း ပရိသတ္ေတြကို အသည္းယား အခ်စ္ပိုေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
“ခ်စ္ပါ လို႔ ေတာင္းဆိုမိတာ မ ရဲ့ အမွားတစ္ခုလား ေမာင္
မ ရဲ့ One lady Show နီးၿပီေနာ္
လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းလို႔ရပါတယ္ ေမာင္..” ဆိုၿပီး အရြန္းေဖာက္ကာ ခ်စ္စဖြယ္ေလးဆိုရင္း သူမရဲ့အလန္းစား ပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဝမၽွထားတာပါေနာ္..။
ကဲ.. ပရိသတ္အသည္းေက်ာ္ေလး ပိုပိုကေတာ့ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၉)ရက္ေန႔ေလးမွာ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ One Lady Show ပြဲႀကီးျဖစ္တဲ့ Masterpiece In Mandalay Show ပြဲႀကီးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ Yadanarpon Event Park မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မွာမို႔ ပရိသတ္ေတြ အားေပးၾကဖို႔ အသင့္ပဲလား..??
ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက် လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာ မှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအားတူး ဖော် ရရှိ
အသေးစိတ်လိုက်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးတ တ်တဲ့ ချစ်သူလေးကြောင့်ကြည်နူး နေရတဲ့အိမ့်ချစ်ရဲ့Video
ပြည်သူတွေကို သတိပေးစာရေးသားလာတဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက် August 4, 2021
မိုးကြိုးပစ်တာတွေ များနေလို့ သိထားရမည့် ဗဟုသုတ တွေ မျှဝေပေးပါတယ် August 4, 2021
မြောက်ဒဂုံဘက်က ဒုက္ခသည်စခန်းဘက်ကိုကြက် ဥအ လုံး ရေ တစ်သောင်းကျော်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပ ရဟိတမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေ August 4, 2021
တောတောင်ထဲမှာ အနေဆင်းရဲ၊အစားဆင်းရဲနဲ့ စစ်ပ ညာ သင်ယူနေရတဲ့ သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုပြ သ လာတဲ့ PDFရဲဘော်တစ်ဦး August 4, 2021